ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ - Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd - 乐动平台网址,乐动体育app官网入口
Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd. သည် ရေခဲသေတ္တာလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်နှင့် ပေးသွင်းသူအချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ဤစာမျက်နှာသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
1. ဥပဒေများနှင့် အခြားစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများနှင့် မူဝါဒများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ အခြားစည်းမျဉ်းများအားလုံးကို လိုက်နာပါသည်။
2. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ကိုင်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို တည်ထောင်ခြင်းနှင့် အဆက်မပြတ် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်အား ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးတွင် ဒါရိုက်တာများမှ အငယ်တန်းဝန်ထမ်းများအထိ သေချာစွာထုတ်ပြန်ထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျော်သောကာကွယ်မှုနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအသုံးပြုမှုအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
3. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည့် အသုံးပြုမှုများကို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ပါသည်။ဤကန့်သတ်ချက်များအတွင်း၊ သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦးချင်းစီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ရယူ၊ အသုံးပြုကာ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုံခြုံသောစီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကြိုးပမ်းထားပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဒေတာဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကြားခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သောအစီအမံများကို ချမှတ်ထားပါသည်။
5. ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ခြင်းအတွက် တောင်းဆိုချက်များအား တောင်းဆိုသူ၏အထောက်အထားကို ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အတည်ပြုချက်ကို အမှုကိစ္စအခြေခံဖြင့် တုံ့ပြန်ရမည်။
*ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သော မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆို Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd. အထွေထွေရေးရာဌာနခွဲသို့ ညွှန်ကြားပါ။